मोबाइल हरायो चिन्ता छैन, प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस् !
भादगाउँ / मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थली बस्ने अरविन्द आचार्यको सामसुङ ग्यालेक्सी जे फाइभ मोबाइल सेट सार्वजनिक यातायातमा बालकोटबाट कौशलटार आउने क्रममा हरायो । उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिमा गत मङ्सिर २३ गते मोबाइल पाकेट मारेको चनी निवेदन दिए ।
प्रहरीले खोजतलासको क्रममा सो मोबाइल काठमाडौँको स्वयम्भूमा फेला पारी गत माघ १५ गते आचार्यलाई बुझायो । मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थली नै बस्ने कीर्तिनिधि भट्टको भिभो भि नाइन मोबाइल सेट स्थानीय निष्ट स्कुल नजिक हरायो । उनले पनि गत माघ ३ गते मोबाइल सेट हराएको निवेदन थिमि वृत्तमा दिए । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सो मोबाइल सेट १० दिनपछि लोकन्थलीबाटै फेला पारी भट्टलाई गत माघ १४ गते बुझायो ।
त्यसैगरी मध्यपुर थिमि राधेराधे बस्ने मोहनकृष्ण खनालको सामसुङ ग्यालेक्सी जे सेभेन मोबाइल सेट गत पुस २० गते मध्यपुर अस्पताल हाताबाटै हरायो । सो मोबाइल प्रहरीले २० दिनपछि काठमाडौँंको नयाँ बानेश्वरमा फेला पारी गत माघ ११ गते खनाललाई बुझायो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र ३५ वटा हराएका मोबाइल फेला पारी मोबाइल धनीलाई बुझाएको छ । वृत्तका अनुसार हप्तामा दुई÷चार वटा मोबाइल हराएका निवेदन आउने गरेको छ ।
हराएकामध्ये महीनामा पाँच÷सातवटा मोबाइल फेला पर्ने गरेको छ । प्रहरीले हराएको मोबाइलका सम्बन्धमा निवेदन लिनका लागि मोबाइल सेटको प्रकार र मोबाइल सेटमा हुने आइओएमआई नम्बरसहितको विवरण उल्लेख भएको निवेदनको ढाँचा नै तयार गरी लागू गरेको छ ।
पीडितले सो निवेदन भरेर दिएपछि निवेदनलाई प्रहरीको अपराध महाशाखा टेकुमा अनुसन्धान र खोजतलासको लागि पठाउने गरिएको वृत्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मोबाइलको खोजी र अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीले हाललाई अपराध महाशाखामा मात्र युनिट खोलेको छ । मोबाइल सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनीसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने र मोबाइल खोजीको प्रविधिका कारण पनि हाललाई महाशाखामार्फत मोबाइलको खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले बताए ।
मोबाइल हराएको निवेदनका आधारमा खोज तथा अनुसन्धान गर्ने र फेला परेपछि कुन प्रकृतिबाट हराएको सो अनुसार कारवाही अघि बढाउने गरेको प्रनाउ केसीले बताए । “मोबाइल धनीले हराएको भनी निवेदन दिएको छ भने फेला परेपछि मोबाइल धनीलाई बोलाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।
चोरी भएको निवेदन हो भने चोरी मुद्दा दायर गरी कारबाही अघि बढाउने गरेका छौँ,” उनले भने,“वृत्तका अनुसार हाल छ वटा मोबाइल चोरीका मुद्दा दायर भएर अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले परिसर र परिसर मातहतका जिल्लाका दुई प्रहरी वृत्तमा गरी सरदर दैनिक एक मोबाइल हराएका निवेदन पर्ने गरेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल फेला पर्ने गरेको उनले बताए ।
मोवाइल हराएका घटना हेर्दा सामान्य देखिए पनि प्रहरीले त्यस्ता निवेदनको निरन्तर छानबिन र खोजी कार्य जारी राख्ने गरेको प्रनाउ पोखरेलले बताए । “हेर्दा सामान्य देखिएपनि मोबाइल हराएको निवेदनमा प्रहरीले निरन्तर खोजी जारी राख्ने गरेको छ । त्यसैको परिणाम मोबाइल हराएको छ महीनापछि पनि फेला परेका उदाहरण छन्,” उनले भने ।
सर्लाहीमा प्रहरी र विप्लवबीच भिडन्त, जिल्ला इन्चार्ज मारिए
असार, 5, 2076
सर्लाही / सर्लाहीको लालबन्दीमा बिहीवार प्रहरी र न�... ... ...
विप्लवका दुई इन्चार्ज सहित पाँच कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौं / नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहका दुई �... ... ...
पोहोर वर्षभरीमा आउनेजति रेमिट्यान्स अहिले १० महिनामै आयो
काठमाडौं / विदेश जाने नेपालीको संख्या पोहोरभन्�... ... ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायी र बिचौलियाको बन्धक
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गामा स�... ... ...
नेतालाई नेपालकै अस्पतालमा उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन सांसद्को प्रस्ताव
काठमाडौं– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्... ... ...
मादक पदार्थ सेवन गरी किशोरी सुतिरहेको ठाउँमा जाँदा…
विपी प्रतिष्ठानद्धारा प्रवेश परीक्षा स्थगित
अब एनजीओले अनुमतिविना कार्यक्रम गर्न नपाउने
मनसुनी गतिविधि बढ्यो, देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली
आरक्षण र सङ्घीयता : बरदान कि अभिशाप ?
बिहीबार कोरियन मुद्राको भाउ केही बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति
कांग्रेसले सदनमा नै माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
नेकपाको निस्कर्षः आन्दोलनमा घुसपैठ , नजिकवाट नियाल्न नेता र सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आजको मुल्य